whatajoke 1697 days ago
BadhiJanne 1693 days ago
thirdLeg 1692 days ago
Khaobaadi 1690 days ago
whatajoke 1689 days ago
Nas 1686 days ago
Visitor is reading obsessed with boobs
[VIEWED 630217 TIMES]
Posted on 04-20-16 5:33 PM [Snapshot: 18467] Reply [Subscribe]
ल यहाँ अलिक सेंसिबल मान्छे भनेको हाम्रो व्हटअजोक ब्रो मात्र पर्न भएछ ...(प्लस साझाकाअरु ट्रंप वा टेड क्रुज सपोरटरहरु )
मेरो फेभरेट क्यान्दिदेट डाक्टर र्यान्ड पलले राम्रो गर्न सक्नु भएँन ! उहा आउट हुन् भयो ! मलाई दोस्रोमा टेड क्रुज पनि मनपर्थ्यो तर "लाइङ्ग" टेड क्रुज अलिक बुश ३.० जस्तो लाग्न थालेको छ अचेल ! तेसैले मेरो फुल सपोर्ट डानल्ड ट्रंपलाइ नै हो ! त्यो कोर्पोरेट मेघा होर, बेस्या रन्डी हिलरी र कमीउनिस्ट बास्टर्ड बर्नीले यो देश दुबाउञ्छ, मिडल क्लासलाइ वाइप गर्छ ! साला खाते डेमोक्य्राट्सहरुले ओबामा आएर के के न गर्छ भनेर, त्यो रन्डीको छोरोलाइ जितायो ! तेस्ले यो देशलाइ बर्बाद पारेर जाँदै छ ! अब तेही भातमारा भुसिया डेमोक्य्राट्सहरुले रन्डी हिलरी वा बर्नीलाइ सपोर्ट गर्दै छन् ! थुक्क गधाहरु हौ ! तिमीहरु सबलाई किउबामा डिपोर्ट गर्न पर्ने ! सार्है रिस उठ्छ मलाई खाते लिबरलहरु देखेर !
म येही धागोबाट मेरा समस्त प्यारा नेप्लिज अमेरिकन दाजु भाइ दिदि बहिनिहरुलाइ एस पालि रिपब्लिकन केंदिदेत डानल्ड ट्रंप वा टेड क्रुज जो आए पनि उहाहरुलाइ नै भोट खसाल्न बिनम्र आग्रह गर्दछु ! उहाहरुले मात्र तपाई जस्ता मिडल क्लासहरुको हितमा काम गर्नेछन ! देमोक्र्यट्स आयो भने तेही हो ...तपाईको ट्याक्स जति सबै इलिगल लाटिनोहरुलाइ फूड स्ट्यामप्प्स र हरेक खालको वेलफेर बाडेर तिनीहरुको भोटरबेस बढाउने काम मात्र गर्ने छन् र यो देशको ढुकुटी सखाप पार्ने छन् ! तपाईहरु जस्तो मरी मेटेर ट्याक्स तिर्ने मान्छेले कहिले नि लिबरल सोसियेलिस्ट, कमीउनिस्ट कुक्कुरहरुलाइ भोट हाल्न हुँदैन !
मेरो बिन्ति छ हजुर !
Posted on 04-21-16 11:10 AM [Snapshot: 18618] Reply [Subscribe]
हो व्हतअजोक ब्रो ! मैले थाहापाको अमेरिकन प्रेसिदेंसियेल हिस्ट्रीमा डानल्ल्ड ट्रंपलाइ जतिको अपहेलना त् कसैलाई गरेको छैन होला ! उहालाई रेसीस्ट, सेकसिस्ट, एन्टी-मुसलमान देखि लिएर अरु नाना थरिको ट्याग लगाइदेको छ मिडियाले ! तर ट्रंप एक सच्चा नेसनलिस्ट हुन् जो कसैको पैसामा बिक्ने कोर्पोरेट अमेरिकाका रखेल पोलिटिकल बेश्या होइन ! म पोलिटिकल्ली लिबेर्तेरियेंन आइडियोलोजीको चेला हूँ तर क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म र लिबेरलिज्मसंग धेरै कुराहरु मिल्न जान्छ ! यो अहिलेका निओ लिबेरल र निओ रिपब्लिकनहरु चै देश द्रोही नै हुन् मेरो बिचारमा !
बर्नीको एउटा मात्र कुरो के राम्रो छ भने उ एक दम प्रिन्सिपल भाको मान्छे हो ! त्येसको म कदर गर्दछु तर त्यो जान्ठा कट्टर कमीउनिस्ट हो ! तर अहिले दुवै बर्नी र ट्रंपको बिरुध्ह मिडिया देखि पोलिटिकल इस्ताब्लिश्मेंटसम्मले हरेक किसिमको सड्यन्त्र रचिराका छन् ! किन कि पावर एलिटलाइ त् खाते ल्याप डग क्यांदिदेत चाहिएको छ, जसलाई सजिलो संग कन्ट्रोल गर्न सकोस ! बर्नी र ट्रंप, अरु खाते भुसिया कुक्कुरहरु जस्तै चै परेन ! तर पलिसी वाइज ट्रंपले यो देशलाइ बनाउछ भने बर्नीले यो देशलाइ जलाउञ्च !
Posted on 04-21-16 7:49 PM [Snapshot: 18747] Reply [Subscribe]
"Proud of you NAS bro!!!"
फ़ाइनल्लि मेरो साझाको ११ बर्षको यात्रामा व्हटअजोक ब्रोकोबाट एस्तो मिठो बचन सुन्न पाए ! आज सम्म साझामा म देखि कोइ नि "प्राउड" भाको थिएन !
ट्रंपको र्यालीमा नेपाल र ट्रंपका नेपाली फ्यानहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै !
Last edited: 21-Apr-16 07:50 PM